महिलाले ट्वाइलेट सम्झेर विमानको इमरजेन्सी ढोका खोलिदिएपछि..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
महिलाले ट्वाइलेट सम्झेर विमानको इमरजेन्सी ढोका खोलिदिएपछि...
लण्डन। बेलायतको म्यानचेस्टर विमानस्थलमा शनिबार एक महिलाले पाकिस्तान यन्टरनेशल एयरलाइन्सको विमानको इमरजेन्सी ढोका खोलिदिइन् । महिलाले इमरजेन्सी ढोकालाई ट्वाइलेटको ढोका ठानेर यस्तो गरेकी थिइन् । यो घटनाका कारण विमानको उडानमा ७ घण्टा ढिलाइ भएको सिएनएनको समाचारमा उल्लेख छ । विमान म्यान्चेस्टरबाट इस्लामाबाद आउँदै थियो ।
घटनाका बेला विमान पीके ७०२ रनवेमा थियो । महिलाले झुक्किएर इमरजेन्सी गेटको बट दबाइदिइन् । विमानमा ४० यात्री सवार थिए । घटनापछि उडानमा ७ घण्टाको ढिलाइ भयो । मानक व्यवस्थाका अनुसार सबै यात्रीलाई विमानबाट निकालियो । उनीहरुलाई खानपिनको व्यवस्था गरियो र अर्को विमानबाट इस्लामाबाद पठाइयो ।